Lezie anya maka Igwe Igwe Igwe Ọhụhụ Anya! | Gam akporosis
Android Alert!: Lelee maka Igwe Igwe Igwe Ọhụhụ Anya
Dị nnọọ awa ole na ole gara aga, m gwara gị nke ịdị adị dị ka Kaspersky de Trojan ohuru nke gha eji network TOR ime nke ha na-enweghị onye ọrụ ọbụla hụrụ na n'elu n’etinyeghi ihe ojoo obula.
Ugbu a na ọhụụ a na nke ndị enyi anyị na ndị ọrụ ibe anyị gosipụtara de Androforall, Chema Alonso, onye a ma ama na onye a ma ama hacker gaara achọpụta koodu ojoo na ngwa a Igwe abalị ọhụụ nke ka dị taa na Jụọ ụlọ ahịa maka nbudata na ntinye nke onye ọrụ gam akporo ọ bụla.
E kwuru banyere ya na onye ama ama nke hacker Chema Alonso ga-eji nlezianya nyochaa ngwa nke ngwa ahụ ma mee ya maka onye ọ bụla na blọọgụ nke ya akụkụ nke koodu a na-ewere na o bu ihe ojoo nakwa na ha ga-enye ngwa ahụ ikike nata ma zipu SMS nakwa dị ka intercept ha ka onye ọrụ ghara ịghọta na ọ na-tụrụ ụtụ na otu n'ime ndị a na-akpọ ọrụ nke Adịchaghị SMS Ha na-akwụ gị ụgwọ dị oke oke na nnata nke ozi ọhụụ anatara.
Kedu ka ị ga - esi hụ na nseta ihuenyo ahụ na nkeji ole na ole gara aga, ejiri m kọmputa m, ngwa a ka odi ke ukara gam akporo ngwa ahịa. Na-enwe olileanya na nke na-esonụ awa ole na ole Google mee ihe megide ngwa a ebubo ebuboAnyị na-arịọ gị ka ị ghara ibudata ya na onye ọ bụla tinyegoro ya, gbaa ọsọ ka ị wepụ ya wee lelee ụgwọ ekwentị gị ka ị ghara inwe ihe ijuanya na njedebe nke ọnwa.
Ozi ndị ọzọ - Ihe ngosi Android!: TOR Trojan mbụ maka achọpụtara gam akporo
Isi mmalite - Androforall
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Nche » Android Alert!: Lelee maka Igwe Igwe Igwe Ọhụhụ Anya
@ Nnadozie202 dijo
Kedu ka ị si mara na ọ bụghị mkpọsa mgbasa ozi na-adịghị mma megide ngwa ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-emepe ya?
O doro anya, inye ngwaọrụ ahụ ikike ndị ahụ agaghị ekwe omume. O doro anya na ọ bụ ngwa na-acha naanị igwefoto igwefoto, mana site na ebe bọọlụ nwere koodu ọjọọ ka mmiri gbara mmiri na mberede, dị ka ọ dị, ịsị nke pere mpe, obere.
Na mgbakwunye, na Storelọ Ahịa Google ha adịghị nwayọ nwayọ ka ha wee nyochaa ngwa nke bulite na ụlọ ahịa ha. Ezigbo akụrụngwa na ndị ọrụ ha nwere maka ya.
Ka anyị nwee olile anya nke ịkpọ Google na nke a na mgbasa ozi nwere ezu iji ruo ndị ọrụ ya.
Zaghachi @ 202A (@ 202A)
Iji chọpụta ihe kpatara ị wụnye ya ma gwa anyị otu enyi, ọ ka dị na Storelọ Ahịa Play maka nbudata.
Kedu azịza Francisco ...
Zaghachi Juan García
Ha niile bụ nwoke nwere mmasị nwoke: v Ggggg
Zaghachi Elvis Tek
Kpọọ ngwaọrụ dị ịtụnanya nke ga - enyere gị aka ijikwa ekwentị ọ bụla
Webogram, ụdị Telegram iji tụgharịa na Chrome